Maitiro Ekugadzira Iyo Snapchat Ad | Martech Zone
Mumakore mashoma akapfuura, Snapchat yakakura ichitevera kune anopfuura mamirioni zana pasirese nemavhidhiyo anopfuura gumi bhiriyoni ari kutariswa pazuva. Nemutengo wakawandisa wevateveri pane ino app zuva nezuva, zviri kushamisika kuti makambani nevashambadzi vari kudirana kuSpapchat kushambadza kumisika yavo yavanotarisira.
Millennials parizvino inomiririra 70% yevashandisi vese paSnapchat Nevashambadziri vanoshandisa mazana mashanu muzana pamamirioni kupfuura vamwe vese vakasanganiswa, zvavari kuita hazvirambiki. Nehurombo, makambani achiri kuyedza kushambadzira kumireniyamu sezvavakaita kumazera ekare; zvisinei, kungofanana nechizvarwa chese, zviuru zvemamirioni zvine zvadzinoda uye zvido izvo vashambadziri vanofanirwa kunzwisisa kuti vabudirire mumishandirapamwe yavo.
Masocial media saiti senge Facebook ne Instagram vanga vachishandisa yavo hombe mushandisi base kukwezva kune zvigadzirwa zvinotsvaga kushambadza kwemakore ikozvino. Kunyangwe Snapchat yakamira kwenguva yakati rebei kumberi kwekushambadzira, iyo inozivikanwa app ikozvino inobvumidza munhu wese kubva kumakambani makuru kuenda kumabhizinesi emuno kushambadza papuratifomu yavo.
Kune nzira nhatu dzekutanga dzinogona kushandiswa nemaSpapchat kusvika kune vangangove vatengi: Snap Ads, Sponsored Geofilters, uye Sponsored Lenses. Pakati pesarudzo nhatu idzi, makambani ane rusununguko rwakawanda rwekusika nemabatirwo avanoda kuisa marangi avo zvichienderana nezvinotarisirwa nevatengi.
Kushambadzira Sarudzo 1: Snap Ads
Snap Ads ndeyegumi-echipiri, anosvetuka kushambadzira akaisirwa pakati peSnap nyaya. Vanobata vanogona kusvetuka kumusoro kana vachiona kushambadzira kweiyo yakawedzera vhidhiyo kana chinyorwa kuti uwane rumwe ruzivo. Iwo mikana ndeyekuti iwe waona aya ma ads pane yako nyaya yenguva, asi unoigadzira sei imwe?
Kune makambani akakura, Snapchat inochengetera iyi yekushambadzira sarudzo kune avo chete vane mikana mikuru yekushambadzira mari Snapchat ine timu yeVadyidzani iwe yaunogona kubata kuburikidza neemail pa PartnerInquiry@snapchat.com.
Kushambadzira Sarudzo 2: Inotsigirwa Geofilters
Vanotsigirwa maGeofilters anotsvedza masikirini iwe aunogona kuisa pamusoro peSnap zvichienderana nenzvimbo yako. Ichi chinofambidzana chinopa Snapchatters mukana wekuratidza vateveri vavo kwavari uye nezvavari kuita. Maererano ne Dhata remukati reSnapchat, imwechete National Inotsigirwa Geofilter inowanzo svika 40% kusvika 60% yezuva nezuva Snapchatters muUS. Nekuda kweiyi yakakura kusvika uye pesvedzero, Snapchat rave rakanyanya kukwezva kushambadzira sarudzo kumakambani makuru.
Zvisinei, maGeofilters haagumiri kumakambani makuru. Nekuti izvi kushambadza zviri nyore kugadzira, zvazove zvinozivikanwa kwazvo pakati pemabhizimusi madiki uye vanhu. Kunyangwe iwe urikumhanya yenyika kushambadzira mushandirapamwe kana kungo gadzirira kushamisika zuva rekuzvarwa reshamwari, Sponsored Geofilters inzira yakanaka kwazvo yekubatana nenyika .
Kugadzira Inotsigirwa Geofilter
patani - Paunotanga kugadzira yako geofilter pamhepo, iwe unosangana nezvisarudzo zviviri. Iwe unogona kusarudza "Use Your Own", mauri kugadzira yako dhizaini kubva pakutanga uchishandisa Photoshop kana Illustrator matemplate anopiwa neSpapchat. Kana, iwe unogona "Gadzira Pamhepo" uye sarudza kubva kusefa sarudzo maererano nechiitiko (kureva zuva rekuzvarwa, mhemberero, michato nezvimwewo). Zvisinei nesarudzo yaunosarudza, ita shuwa kuti uverenge iyo Kuzviisa Mirayiridzo kune yakatarwa pane iyo nguva, mitemo, uye saizi yemufananidzo zvinoda!
mepu - Mune mepu nhanho, iwe unozobvunzwa kusarudza iyo nguva yenguva iyo firita yako ichave yekurarama .. Semutemo, Snapchat haibvumidze mafirita kuti ararame kweanopfuura mazuva makumi matatu. Munguva yemepu nhanho, iwe zvakare uchasarudza nzvimbo nenzvimbo iyo yako geofilter ichave iripo. Ingo gadzira "fenzi" pamepu kuti uone kuti yako geofilter inodhura zvakadii zvichienderana neraiyo yayo.
tenga - Mushure mekugadzira uye kuisa mepu yako geofilter, unozviendesa kuti zviongororwe. Snapchat inowanzo pindura mukati mezuva rimwe bhizinesi. Paunenge wagamuchirwa, tenga yako Geofilter pane webhusaiti yeSnapchat uye unomirira kuti iende kurarama!
Kushambadzira Sarudzo 3: Inotsigirwa Lense
Yechitatu Snapchat yekushambadzira sarudzo yemhando dzinogona kushandiswa ndeye Inotsigirwa Lense. Lens chiratidzo chekucherechedzwa kwechiso paSnapchat iyo inogonesa hunyanzvi hwekugadzira kuti huve pamusoro pechiso chemushandisi. Aya malenzi anoshanduka zuva nezuva uye anongoita zvisina kujairika uye nechinangwa sekuda kwaSpapchat.
Nepo ruzhinji rwemalenzi rwakagadzirwa neSnapchat, makambani anogona kugadzira nekutenga lenzi zvekushambadzira. Nekudaro, nekuti lenzi dzinotsigirwa dziri kudhura zvakanyanya kutenga, isu tinowanzoona malenzi emhando hombe dzakadai seGatorade kana Taco Bell.
Kunyangwe zvingangonzwika kunge zvakapusa kushandisa $ 450K - $ 750K pazuva pamushandirapamwe weSpapchat, makambani makuru akaratidza kuti kuisa mari mune lens inotsigirwa kunobatsira zvikuru. Gatorade "Super Bowl Kukunda Lense," yakaridzwa kanopfuura mamirioni makumi matanhatu nguva, ichizvikudza mamirioni zana nemakumi manomwe nemashanu! Nekuda kweizvozvo, Gatorade akaona kuwedzera kwe60% muchinangwa chekutenga.
Zvichienderana nenhamba idzi, zviri pachena kuti kugona kweSponsored Lense kunoshamisa. Nekuda kwemutengo wemutengo wakakura unobatana navo, Snapchat ine mashoma malenzi anotsigirwa kune makuru mabhurandi ane akakosha mabhajeti. Nekudaro, kana iwe ukave uine $ 450K- $ 750K yakarara yakatenderedza uye uchida kugadzira Inotsigirwa Lense, bata chero yeiyo Snapchat kushambadzira vanobatsirana kana kutumira email pa PartnerInquiry@snapchat.com. Vabatsiri vacho vachakubatsira iwe mune ese matanho ehurongwa hwekuratidzira kupa mazano ekugadzira uye kupindura chero mibvunzo yaungave unayo ..
Nesimba rayo rakakura revashandisi uye sarudzo dzekushambadzira dzekushambadzira, Snapchat yakaratidza kuve chikuva chinonyanya kukosha kumakambani ezvese zvimiro uye saizi yekudyidzana nevanovavarira vateereri. Kana iwe uri kuronga chiitiko kana kuburitsa chigadzirwa chitsva, funga imwe yesarudzo dzambotaurwa uye tanga kuona shanduko dzakakwira mudenga!
Tags: Zviuru zvemakoresnap adssnapchat adssnapchat kushambadzasnapchat geofiltersnapchat lenzisnapchat snap adssnapchat inotsigira lenzi
Ini ndanga ndichinetseka kana iwe uine ruzivo rwekugadzira Snapchat lenses, ndeapi softwares avanoshandisa? zvimwe ungaziva.